Warar: May 31, 2007
Dadkii ka barakacay caasimada muqdisho oo qaarkood kusoo laabtay xaafadaha ay ka ag-dhow yihiin ciidamada xukuumada Ethiopia ayaa dib uga daad guraysanaya alaabtooda kadib markii halkaas kala kulmeen amaan daro xoogan .
Dadkaas oo qaarkood ay ku dhaqan yihiin agagaarka Warshada Baastada ayaa bilaabay in ay isaga guuraan hareeraha Warshada kadib markii ay dhibaato amaan daro oo xoogan kala kulmeen deegaankaas oo mararka qaarkood qaraxyo lala beegsado ciidamada ethiopianka ay ugu jawaabaan tacshiirad ay la beegsanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan xaafadaasi
Qaar ka tirsan Dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaankaas ayaa saxaafada u xaqiijiyey inay xaafadaasi noqotay meel aan amaan ahayn islamrkaana ay aargoosi iyo dhibaato baahsan ku hayaan ciidamada ethiopianka ee fariisinkoodu yahay wersheda baastada
Axmed xuseen oo kamida dadka rayidka ah ee xaafadaasi ayaa sheegay inay dhibaato xoogan oo amaan darro ka jirto xaafadaasi islamrkaana ay lafahooda ula baxsanayaan ,taasoo uu sii raaciyey waxaanba ka cabsi qabnaa inay dhac iyo boob noo gaystaan ciidamadaasi Ethiopia islamrkaana ay haweenka naga fara xumeeyaan .
Axmed oo ay saxaafadu waydiisay ciidamada Ethiopia miyay shacabka xaafadaha soo fara geliyaan mise marka qarax loo gaysto ayay dadka dhibaateeyaan ,waxuuna ku jawaabay walaahay dadka rayidka ah waxaa haysta dhibaato xoogan waayo ciidamada Ethiopia iyagaa fara gelin aad u xun ka dhex wada xaafadaha sababta oo ah waxay fatishiyaan haweenkii xijaabka indho-shareerka xirnaa islamarkaana aan wax ixtiraam ah siinayn taasina waxay kicinaysaa dadka muslkimiinta ah eek u dhaqan xaafada .
Axmed oo hadalkiisii sii wata ayaa intaas raaciyey looma adkaysan karo nin xaaskiisii muslimada ahayd oo sida sharciga islaamku qabo xijaaban hadii asakari Ethiopian ahi uu ka furto xijaabkii waa dhibaato aad u xun islamrkaana keeni karta diin la,aan hadaba ciidamada Ethiopia iyaga ayaa waxay wadaan dhibaato iyo fara gelin baahsan oo weliba anshax darro taas ayaana keenaysa inaan iskaga guurno xaafadaasi .
Sidoo kale Barakacan cusub ee ka bilowday deegaanadaasi ku xeeran agagaarka wersheda baastada ayaa kusoo beegmaya xili 3- qof oo rayid ah lagu diley todobaadkan gudahiisa deegaankaasi islamarkaana loo aaneeyey inay su ula kac ah u dileen ciidamada xukuumada Ethiopia ee ku sugan agagaarka wershedii hore ee baastada .
Binti Jaylaani oo Australia Looga Helay Dhakhatar Lagu Daweeyo